Valanaretina pesta : Tsy mianatra ny mpianatra aorian’ny fandrarahana fanafody -
AccueilRaharaham-pirenenaValanaretina pesta : Tsy mianatra ny mpianatra aorian’ny fandrarahana fanafody
Nanao fanambarana ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Paul Rabary omaly fa tsy mianatra, ary tsy tokony handeha any an-tsekoly ny mpianatra, raha tsy telo andro aorian’ny fandrarahana fanafody ireo toeram-pianarana rehetra. Voakasika amin’ity ady sy fisorohana amin’ny mety hifindran’ny valanaretina pesta ity avokoa, na ny sekolim-panjakana, na ny sekoly tsy miankina eto Antananarivo. Natomboka omaly hariva teny amin’ny EPP Andraisoro io fandrarahana fanafody io, ary hitohy manerana ireo sekoly rehetra eto an-drenivohitra.
Na dia mbola tsy nisy aza ny firosoana tamin’ny fandrarahana fanafody eny amin’ireo toeram-pianarana eto an-drenivohitra, dia maro tamin’ireo ray aman-dreny no nisafidy ny tsy handefa ny zanany ho any an-tsekoly, mba hisorohana ny mety hifindran’ny valanaretina pesta. Nisy tamin’ireo toeram-pianarana, toa ny sekoly katolika eto an-drenivohitra, sy ny Alliance Française etsy Andavamamba ihany koa no nanatsahatra, ary nanapa-kevitra ny hanemotra ny fidiran’ny mpianatra, noho izay antony izay ihany. Na dia eo aza izay filazana mahakasika ny fihanaky ny pesta izay, dia misy amin’ireo sekoly sasany no mbola miziriziry amin’ny fampakarana ny ankizy ho any an-tsekoly. Ankoatra ny fanadiovana faobe ny manodidina rehetra, izay atomboka any amin’ny isan-tokantrano, dia efa manomboka miroso amin’ny fandrarahana fanafody ireo toerana rehetra be olona mifamezivezy ny minisiteran’ny Fahasalamana miaraka amin’ireo tompon’andraikitra voakasika amin’izany, amin’izao fotoana izao.
Ho an’ireo toeram-pianarana kosa, dia eny amin’ny EPP Andraisoro no nanombohana izany omaly hariva. Nisy tamin’ireo sekolim-panjakana toa ny EPP eny Ankorondrano izao ohatra no nanao fanadiovana ny sekoly io omaly io ihany, izay niarahana tamin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra, ary anio ny BMH no hiroso amin’ny amin’ny fandrarahana fanafody ao amin’ny faritry ny sekoly. Nanatanteraka fitsidihana manokana ny EPP Ambohimiandra kosa ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Paul Rabary omaly, nampahafantatra ireo mpianatra ny fomba fisehon’ity otrikaretina ity sy ny fomba hisorohana izany, noho izy akaikin’ny hopitaly eny an-toerana. Tsara homarihina ihany koa fa noho ny tsy fahazoana manao famoriam-bahoaka noho ny fihanaky ny pesta izay ihany, dia nofoanana ny “rentrée solennelle sy ny fivorian’ny “proviseur” miaraka amin’ny talen-tsekoly any amin’ny faritra, izay tokony hotanterahina amin’ny alakamisy sy zoma ho avy izao.
Tafakatra 25 no namoy ny ainy
Raha ny salan’isa mazava voaray eto am-pelatanana, dia tafakatra 25, tamin’ireo tranga 141 manerana ny Nosy, no isan’ny olona maty vokatr’izay pesta izay. Zazakely vao 10 volana monja, namoy ny ainy teny amin’ny hopitaly Ambohimiandra, ny alin’ny alahady lasa teo, no nameno izany isa izany. Araka ny antontan’isa nomen’ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany, dia ny 13 amin’ireo olona ireo no efa voamarina fa voan’ity valan’aretina ity, ary efa manaraka fitsaboana. 70 kosa no ahiahiana ary 58 no mbola tsy voamarina. Ny 116 tamin’ireo olona voalaza fa nitondra ity valanaretina pesta ity no fantatra fa efa voatsabo tanteraka amin’izao fotoana izao. Araka ny fanadihadiana natao ihany koa, dia ny 80 amin’ireo trangana pesta eto Madagasikara, dia saika pesta aretin-tratra avokoa, no mihanaka sy mahafaty ireo olona. 59 kosa ny pesta atodintariana. Amin’izao fotoana izao, dia olona 06 no manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly Ambohimiandra, 02 ao Befelatanana, 01 ao amin’ny HJRA, ary 01 ao amin’ny hopitaly Soavinandriana. Samy ahiana ho mitondra ity otrikaretina ity avokoa ireo olona ireo. Tsara homarihina ihany koa, fa nisy mpitsabo 05 voan’ity valanaretina ity tany Toamasina, ary mbola manaraka fitsaboana any an-toerana. Raha ny fahazoam-baovao farany, dia efa tsy misy ahiana intsony ny ain’izy ireo.
Nilaharana ny “cache-bouche”
Maro tamin’ireo olona nifamezivezy teny an-dalana rehetra teny sy tany anaty fiara fitateram-bahoaka, no hita nanao ireny fanampenam-bava ireny, omaly. Nilaharana mihitsy aza io fitaovana io teny amin’ireo farmasia teto an-drenivohitra. Nohamafisin’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany koa fa tokony soloana isaka ny valo ora io fanampenam-bava iadiana amin’ny fifindran’ny valanaretina pesta io, ary tsy tokony ampidirina any an-trano fa dorana avy hatrany vantany vao avy nampiasaina.
Ireo toerana ahiana
Ankoatra an’Antananarivo renivohitra, dia ahiana ho misy ity otrikaretina ity ihany koa ireto distrika manaraka ireto: Ambohidratrimo, Andramasina, Ankazobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Miarinarivo, Arivonimamo, Moramanga, Tsiroanomandidy, Ambatondrazaka, Faratsiho, Anosibe an’ala, Toamasina I sy II, Maevatanàna, Mahajanga I, Vohemar ary Ambalavao.
Amin’ny ankapobeny dia fanaviana avokoa no hiandohan’ny aretina pesta. Na izany aza anefa dia samy manana ny fomba fisehony, na ny peste aretin-tratra na ny pesta atodintariana. Ny pesta aretin-tratra dia miseho amin’ny alalan’ny kohaka , aretin-tratra ary rehoka misy rà, izay mifindra amin’ny alalan’ny piti-drora na ny fofon’aina. Ny pesta atodintariana kosa, dia miendrika fivontosana eo amin’ny tenda, ny helika ary ny foto-pe.
Mba ahafahana misoroka ity valanaretina ity, dia tsy misy ohatra ny fanantonana dokotera faran’izay haingana, raha vao mahita tranga hafahafa. Nambaran’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany koa fa tsy tsara, ary tsy tokony afenina mihitsy, raha mitondra io valanaretina mandripaka io ny olona iray. Ho fanampin’ireo voalaza ireo, dia tsy tokony hanao ambanin-javatra ny fahadiovana ny isam-batan’olona sy ny isan-tokantrano, mba hisorohana izany tsy hahazo laka.
Noraisina ho isan’ny modely sy fitaratra aty Afrika ny zava-bitan’i Mandela tamin’ny androm-piainany. Ny tantara no maha firenena ny firenena iray. Nisy ny fanomezana loka ho an’ireo olona nahavita be ho an’ny fandriam-pahalemana aty Afrika, ...Tohiny